NISA oo saaka degmada Hodan ku qabatay gaari qarax laga soo buuxiyay – STAR FM SOMALIA
NISA oo saaka degmada Hodan ku qabatay gaari qarax laga soo buuxiyay
Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka qaranka ee NISA ayaa saaka gacanta ku dhigay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo la dhigay agagaarka Madaxtooyadii hore ee C/qaasim ee degmada Hodan.
Gaarigan oo ahaa nooca loo yaqaano Kaarib ayaa lagu soo wargeliyay Hey’adda NISA, iyadoo durbadiiba ciidamada ay ka howl galeen, isla markaana waxyaabihii qarxa ee ku jiray ka fur furay.
Wakaalada wararka Soomaaliyeed ee SONNA oo soo xiganeysa saraakiil ka tirsan NISA ayaa sheegay in gaariga la qabtay waabarigii hore ee saaka, isla markaana la doonayay in shacabka lagu waxyeeleeyo.
Ciidamada Nabadsugida ayaa dadka ka ag dhowaa halka gaariga yaalay ka saartay, kadibna waxaa lagu guuleysray in laga fur furo waxyaabihii qarxa ee saarnaa.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir C/fataax Cumar Xalane ayaa sheegay in xog ay shacabka soo gudbiyeen looga hortagay gaariga waxyaabaha qarxa siday, lana rabay in shacab lagu dhibaateeyo.
Waxaa uu sheegay in gaariga ay ka buuxeen bambooyin iyo gumacyo rasaas, iyo shidaal, isagoo xusay in si geesinimo leh ay uga hortageen ciidamada, una fashiliyeen.
Howl gallo ballaaran ayaa saaka ka socda qeybo ka mid ah degmada Hodan, iyadoo lagu raad-joogo kooxo lagu tuhunsan yahay in weeraro geysan rabeen.
Gaarigan laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa la sheegay in la fashiliyay ka hor inta aan bartilmaameedkii loo waday la gaarin.
Dagaal xalay ka dhacay Xaafada Suuqa Xoolaha ee Degmada Heliwaa
United Nations’ Monitoring Group on Somalia (SEMG) Obstructs Somalia Recovery+ (Pictures)